16 Talaabo oo Lagu Qasbo Abuurista Mawduucyada | Martech Zone
Khamiis, Juun 17, 2014 Douglas Karr
Mararka qaarkood liis-hubineed ayaa nolosha ka dhigaya mid fudud kanna wuxuu ku fiicanyahay fikradaha ku saabsan soosaarista abuuritaanka waxyaabo ku kalifaya xushmad WebSearch SEO. Waan jeclahay talooyinka halkan maxaa yeelay waxay ka sii gudubtaa warbaahinta dhabta ah waxayna tilmaamaysaa cunsurro kale oo ka dhigaya cunitaanka waxyaabaha si fudud sidoo kale.
16-ka Talaabo ee Qasabinta Abuurista Mawduucyada:
U fikir sidii weriye.
Ka hel dhiirigelin shabakaddaada.
Isku day gaaban, kooban.
Adeegso wararka warshadaha.
Ku sii wada sheekaysiga.
Isticmaal sawir si aad u kaydiso.
Ku martiqaad martida aragtiyaha cusub.
La xiriir dhagaystayaashaada mawduucyada.
Dib u soo dir oo soo celi waxyaabaha ku habboon.
Daacad ka noqo sida ugu fiican ee aad u fahamsan tahay mowduuca.
Samee shaqada gurigaaga oo aad baaris ku sameyso mowduuca.
Ka dhig hagaha mid sahlan oo waxaad siisaa waddo aad ku hawl gasho.
Kala fogee mowduucyada iyo bogagga degitaanku.
Ka fogow mowduucyada duugoobi doona.
U wareeji fiidiyow iyo maqal.
Tags: dhererka maqaalkaqaniinyo-cabbirwaxyaabaha ku kalifayaabuur abuurkaContent Suuqsheekaysanayoboosteejada martidamartidashaqada gurigadaacadnimosawirimageswaxyoonaywariyeboggaga soo degayanavigationnews-jacknews-jackingkormeerosawirogaadhoKordhinta IibkaSEOka codsotalaabooyinkaguultimiriskaqoraalkabaadhitaanka webka